ကားလျပေါ့ပါ (သို့မဟုတျ) လဈဘရယျဒီမိုကရစေီအား ခုခံကာကှယျသူ – Kyaw Zaw Oo's Blog
August 9, 2021 August 9, 2021 web_master
ကားလျပေါ့ပါ (သို့မဟုတျ) လဈဘရယျဒီမိုကရစေီအား ခုခံကာကှယျသူ
ကားလ်ပေါ့ပါ (သို့မဟုတ်) လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီအား ခုခံကာကွယ်သူ
နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ လူငယ်များ၊ ပညာတတ်များ၊ တိုင်းပြည်ကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ အကျိုးပြု လိုစိတ်ရှိသူများအား ဖတ်စေလိုသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြောပါဆိုလျှင် ကားလ်ပေါ့ပါ (Karl Popper) ရေးသားသော “Open Society and Its Enemies” (ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ယင်း၏ ရန်သူများ) စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒ၊ နာဇီဝါဒ အစရှိသည့် လုံးစည်းအာဏာရှင်ဝါဒ (totalitarianism) မှန်သမျှကို အခြေခံကျကျ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ထားသော ယင်းစာအုပ်မှာ ရေးပြီးသည့်အချိန်က ထုတ်ဝေမည်သူမရခင် စာအုပ်တိုက် နှစ်ဆယ်ကျော်က ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် စာအုပ်ဖြစ်လေသည်။ ဤစာအုပ်က အဓိကဆန်းစစ်ဝေဖန်သည့် တွေးခေါ်ရှင် နှင်ဦးမှာ ပလေတို နှင့် ကားလ်မာ့ခ်စ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅-ခန့်လောက်ကတည်းက ယင်းစာအုပ် အင်္ဂလန်တွင် စထုတ်ခဲ့သော်လည်း ယင်းအားလက်ခံအားပေးသူ နည်းလှသည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် မာ့ခ်စ်ဝါဒကို အသေအချာ အကျယ်တ၀င့် သုံးသပ်စိစစ် ဝေဖန်ငြင်းပယ်ထားသည့် ထို “ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း” စာအုပ်ကို ၁၉၈၉-ခုနှစ် ဘာလင်တံတိုင်းပြိုကျပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါကျမှ လူအများစတင် သတိထားမိလာကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ပေါ့ပါ၏ ရေးသားချက်များသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အခြေခံမူများကို အူလိုက်သည်းလှိုက် ရဲရဲရင့်ရင့် ကာကွယ်ခုခံသည်၊ ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ကောင်းစွာ အုတ်မြစ်ချတည်ဆောက်အပ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရုပ်ပုံလွှာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်နိုင်ငံ ဖော်ညွှန်းပြလေသည်။
ကားလ်ပေါ့ပါ (၁၉၀၂-၁၉၉၄) ၏ အတွေးအခေါ်များအနက် သိသင့်သိထိုက်လောက်သည့် အကြောင်းအရာ အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြလိုပါသည်။
(က) ပေါ့ပါသည် မှားနိုင်ခြေအားလက်ခံသည့်ဝါဒီ (fallibilist) တစ်ဦးဖြစ်သည်။ “ငါတို့အယူဝါဒသည် မမှားနိုင်၊ ငါတို့အယူဝါဒသည် အမှန်တရားကို အသေအချာသိသည်၊ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတွင် ဘာဖြစ်လာမည်ကို အသေအချာပြောနိုင်သည်၊ ရွှေပြည်တော်ကို လောကနိဗ္ဗာန်ကို မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်ရမည်” ဆိုသော အယူဝါဒများအား ပေါ့ပါ လက်မခံပေ။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ အစရှိသော သမိုင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များကို အသေအချာသိသည်ဆိုသည့် သမိုင်းရေးရာဖြစ်စဉ်သေဝါဒ (Historicism) သည် လူ့ဘောင်လောကတွင် လူမှုစနစ်များကို လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချီ၍ စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကြသဖြင့် ကြီးစွာထိခိုက်နစ်နာမှု ဖြစ်စေကြောင်း ပေါ့ပါက ပြောသည်။
(ခ) ပေါ့ပါက သိပ္ပံနည်းကျအမှန်တရားများကို ရှာဖွေရာတွင် falsification (ခေါ်) အမှားရှာဖွေထောက်ပြခြင်း အားဖြင့် အနီးဆုံးအမှန်ရှာခြင်း နည်းလမ်း သည်သာလျှင် အမှန်တရားနှင့် အနီးဆုံးရနိုင်မည့် နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် – ငန်းမှန်သမျှ သည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည် ဆိုသော အဆိုသည် အဖြူမဟုတ်သော ငန်းတစ်ကောင်ကောင်ကို မတင်ပြနိုင်သေးသရွေ့ မှန်သည်ဟု ယူဆမည်၊ သို့ရာတွင် သြစတေးလျတွင် ငန်းနက်တစ်ကောင် စတွေ့သည်နှင့် ထိုအယူအဆမှားကြောင်း စတင်အတည်ပြုမည် ဆိုသော နည်းလမ်းမျိုးဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဆိုသည့် မာ့ခ်စ်ဝါဒ၏ “သိပ္ပံနည်းကျမှု” ဆိုသည်အား ပေါ့ပါက လက်မခံပေ။ falsification အား critical rationalism ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
(ဂ) ပေါ့ပါသည် piecemeal social engineering (ခေါ်) တစ်ပိုင်းချင်း တစ်လှမ်းချင်း လူမှုစနစ် ပြောင်းလဲရေးဝါဒ ကိုဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့သည်။ လူအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချီ ဖြိုဖျက်အသစ်ဆောက်သည့် အလွန်အလှမ်းကျယ် လောကပြောင်းလဲရေး စီမံကိန်းကြီးများအစား – လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍ၊ တရားစီရင်ရေး ပြုပြင်မှု၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် အစိုးရ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှု စသည်အားဖြင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်သွားခြင်းကို ထောက်ခံအားပေးသည်။
(ဃ) အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒချမှတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် ပေါ့ပါသည် negative utilitarianism (ခေါ်) အဆိုးဘက်ကိုကြည့်မြင်သော အသုံးချပဓါန၀ါဒ ကိုလက်ခံသူဖြစ်သည်။ ယင်းအယူအဆအရ ဆိုလိုသည့်သဘောမှာ – နိုင်ငံတော် (အစိုးရ) ၏ အခန်းကဏ္ဍအား လူတို့အား ပျော်ရွင်စေသောအရာများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကို အဓိကဦးတည်သည်ထက် ဖယ်ရှားနိုင်သမျှသော ဒုက္ခတို့အား ဖယ်ရှားလျော့ပါးစေခြင်းအား ဦးတည်လုပ်ဆောင်လိုသည့် သဘောဖြစ်သည်။ “မသိမြင်နိုင်သေးသော ချမ်းသာသုခများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက် လက်တွေ့မြင်သိနေရသော ဒုက္ခများကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားပါ” Seek to reduce known ills than to produce unknown blessings. ဆိုသည့်သဘော ဖြစ်လေသည်။
(င) ပေါ့ပါ တင်ပြသော သည်းညဉ်းခံအတူယဉ်တွဲနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ ၀ိရောဓိ (paradox of tolerance) သဘောအရ – သည်းညဉ်းခံ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး (tolerance) အား အခြေခံပင်ကိုယ်အားဖြင့် မလိုလားသူများကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ဒီမိုကရေဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် နေရာမပေးအပ်၊ ထိုသည်းညဉ်းမခံသူ (the intolerant) များသည် အားမရှိသေးသောအခါ ဒီမိုကရေဒီအရိပ်ကို ခိုလှုံလှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားပြီး အားရှိလာလျှင် ဒီမိုကရေဒီစနစ်ကို ဖြိုဖျက်ပစ်မည့် သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ပေါ့ပါက ကွန်မြုနစ်များကို အဓိက လက်ညှိုးထိုး ဥပမာပေးသည်။ (ဆိုမာလီယာဖွား အမေရိကန်သူ Ayaan Hirsi Ali က အစ္စလမ်မစ် အခြေခံဝါဒီများ ၏ပြုမှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ပေါ့ပါပြောသော paradox of tolerance ထဲတွင် ထိုနည်းလျင်လျင် ထည့်တွက်စဉ်းစားသင့်ကြောင်း အစဉ်ထောက်ပြလေ့ရှိသည်။)
(စ) ပေါ့ပါ တင်ပြသော လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာဝိရောဓိ paradox of freedom အရ ဆိုလိုသည်မှာ – လွတ်လပ်မှုကို အကန်အသတ်မရှိ လွှတ်ပေးထားလျှင် လွတ်လပ်မှုများ၏ ကျဆုံးခန်းသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပတွင် စက်မှုတော်လှန်ရေးထွန်းကားပြီးခါစ အရင်းရှင်စနစ်ပေါ်ထွန်းခါစ Laissez-faire လက်စေးဖယ်ယာ (ခေါ်) ဇက်ကြိုးမဲ့အရင်းရှင်စနစ်ဖြစ်လေသည်။ အလုပ်ချိန်ကန်သတ်မှုများမရှိ၊ အစိုးရ၀င်ရောက်ထိန်းကျောင်းမှုများမရှိ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေများမရှိ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ မရှိ၊ ပင်စင်ခံစားခွင့်စနစ်များမရှိသည့်ကာလမျိုးတွင် စီးပွားရေးအင်အားကြီးသူများ၏ ထိန်းကွပ်မဲ့လွတ်လပ်မှုသည် စီးပွားရေးအင်အားချိနဲ့လွန်းသူများကို အခပေးကျွန်အဆင့်သာသာသို့ ရောက်သွားစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအခြေအနေများကို အစိုးရက ထိန်းကွပ်ပေးရမည် ဟု ဆိုလိုသည်။
(ဆ) ပါတီအများစနစ်ထက် နှစ်ပါတီ သို့မဟုတ် နှစ်ပါတီ အဓိကပုံစံဖြင့် ပုံဖော်နိုင်ရေးဘက်က ပေါ့ပါ အားသန်ပုံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုနှစ်ပါတီတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်နိုင်မှု ဖြစ်စဉ်သည် ပါတီအများစနစ် သို့မဟုတ် အချိုးကျကိုယ်စားပြုမှုစနစ်ထက် ပိုမိုအားကောင်းသည် ဟု ပေါ့ပါက သုံးသပ်သည်။ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရသော စနစ်များတွင် ပါတီငယ်များသည် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရကို အချိန်မရွေးပြုတ်ကျအောင် လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်ရကား ပါတီငယ်များထံ ရှိသင့်သော အာဏာများထက် မတန်တဆအာဏာများ ရောက်ရှိနေတတ်ကြောင်း သူက ထောက်ပြသည်။
(ဇ) “ပေါ့ပါ အလိုကျ ဒီမိုကရေစီဟူသည်ကား လူအများ၏ အုပ်ချုပ်မှုသက်သက်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ဘယ်ဟာကမှန်တယ် ဘယ်ဟာကမှားတယ် ဆိုတာကို အများစုသဘောအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်မှုကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ပေါ့ပါ ပြောသည့် ဒီမိုကရေစီ ဟူသည်မှာကား ဆိုးသွမ်းအုပ်ချုပ်သူများကို သွေးထွက်သံယို အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲ ဖယ်ရှားအစားထိုးနိုင်အောင် နိုင်ငံတော်ပုံစံအား မည်သို့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သင့်သည် ဆိုသည့် ပြဿနာအား အဖြေထုတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်” ဟု ပေါ့ပါ၏ အတ္ထုပတ္တိအကျဉ်းအား ရေးသားသူ Hannes H. Gissurarson ကဆိုသည်။
ကားလ်ပေါ့ပါ၏ ရေးသားချက်များအနက်မှ မှတ်သားဖွယ် ကောက်နှုတ်ချက်တစ်ခုကို အောက်တွင် ဖော်ပြပါသည်။
“It is high time for us to learn that the question ‘who is to wield the power in the state?’ matters only little as compared to the question ‘how is the power wielded’ and ‘how much power is wielded?’. We must learn that in the long run, all political problems are institutional problems, problems of the legal framework rather than of persons, and that progress toward more equality can be safeguarded only by the institutional control of power.”
‘နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ဘယ်သူကိုင်တွယ်မလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ ‘အာဏာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ‘အာဏာ ဘယ်မျှလောက်ကို ကိုင်တွယ်မှာလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့နှိုင်းစာရင် ဘာမှ အရေးမကြီး သလောက်ပဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ အသေအချာနားလည်ပြီးသား ဖြစ်ရမယ့် ကာလကိုတောင် တော်တော် လွန်ခဲ့ပါပြီ။ ရေရှည်ကျရင် ကျွန်တော်တို့ သိကိုသိလာရမှာက ဘာလဲဆိုတော့ – နိုင်ငံရေးပြဿနာ မှန်သမျှဟာ အင်စတီကျူးရှင်း (ခိုင်မာအစဉ်အလာရေးရာ အဖွဲ့အစည်းတကျဆောင်ရွက်မှုရေးရာ) ပြဿနာတွေသာဖြစ်ကြောင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပြဿနာဆိုတာထက် ဥပဒေမူဘောင်ရဲ့ ပြဿနာများသာဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီးတော့ တန်းတူညီမျှရေးဆီသို့ ဦးတည်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတာမျိုးဟာ အာဏာကို အင်စတီကျူးရှင်းပုံစံကျကျနန ချုပ်ကိုင်ထားမှုအားဖြင့်သာလျှင် ကောင်းစွာစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ် ဆိုတာတွေကို သိနားလည်အောင် လုပ်ကိုလုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ပေါ့ပါ၏ ဤဆွေးနွေးချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ – ဟိုးရှေးရှေး ပလေတို အယူအဆမှသည် ၁၉-ရာစု ကားလ်မာ့ခ်အထိ နိုင်ငံရေးသဘောတရားတို့သည်ကား မည်သို့အုပ်ချုပ်သင့်သနည်း ဆိုသည်ကို မကြည့်ဘဲ “မည်သူ” က အုပ်ချုပ်သင့်သည် ဆိုသည့် ရှုထောင့်မှသာ ကြည့်မြင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် မှားယွင်းခဲ့ကြကြောင်း ပေါ့ပါက ထောက်ပြသည်။
ပေါ့ပါ၏ ဤဆွေးနွေးချက်ကို ဖတ်ရသည့်အခါ လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်ခန့်က မိတ်ဆွေ NLD ပါတီဝင်တစ်ဦးနှင့် စကားစမြည်ပြောမိရင်း သူ၏ နိုင်ငံရေးအမြင်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြစဉ် သူ၏ ပြောစကားတစ်ခွန်းကို မှတ်မိသတိရမိ၏။ သူပြောပြသော သူ၏နိုင်ငံရေးအမြင်များ၏ အဆုံးသတ်၌ “ကျွန်တော်တော့ ဒေါ်စုကို ယုံတယ်ဗျ” ဆိုသည့်စကားကို အလေးအနက် ပြောကြားပါရှိသည်။ ထိုသို့ ဒေါ်စုကို ယုံကြည်ကြောင်း ဒေါ်စုထံတွင် နိုငံရေးလမ်းစဉ်မှန်သမျှကို ယုံကြည်ပုံအပ်ထားကြောင်းကို အခြားသော NLD အမတ်များထံမှလည်း ကြားမိဖူးလေသည်။ အင်စတီကျူးရှင်းပုံစံကျကျ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို မတည်ဆောက်ဘဲ “ဒေါ်စုကို ယုံကြည်ခြင်း” အပေါ် ၀ကွက်အားပြုတည်မှီထားသော ၎င်းတို့၏ ပါတီသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ တပ်က အာဏာရယူသွားမှုဖြစ်စဉ်အား ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စွာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မည် ဆိုသည်ကို ပြင်ဆင်ထားမှု ရှိခဲ့ကြောင်းကိုကား မတွေ့ရပေ။
[လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ (၁၀)]
နိုငျငံရေးကို စိတျဝငျစားသူမြား၊ လူငယျမြား၊ ပညာတတျမြား၊ တိုငျးပွညျကို တဈနညျးတဈဖုံ အကြိုးပွု လိုစိတျရှိသူမြားအား ဖတျစလေိုသညျ့ စာအုပျတဈအုပျကို ပွောပါဆိုလြှငျ ကားလျပေါ့ပါ (Karl Popper) ရေးသားသော “Open Society and Its Enemies” (ပှငျ့လငျးလူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ ယငျး၏ ရနျသူမြား) စာအုပျဖွဈလသေညျ။
ကှနျမွူနဈဝါဒ၊ ဖကျဆဈဝါဒ၊ နာဇီဝါဒ အစရှိသညျ့ လုံးစညျးအာဏာရှငျဝါဒ (totalitarianism) မှနျသမြှကို အခွခေံကကြ ဝဖေနျတိုကျခိုကျထားသော ယငျးစာအုပျမှာ ရေးပွီးသညျ့အခြိနျက ထုတျဝမေညျသူမရခငျ စာအုပျတိုကျ နှဈဆယျကြျောက ငွငျးပယျခွငျးခံခဲ့ရသညျ့ စာအုပျဖွဈလသေညျ။ ဤစာအုပျက အဓိကဆနျးစဈဝဖေနျသညျ့ တှေးချေါရှငျ နှငျဦးမှာ ပလတေို နှငျ့ ကားလျမာ့ချဈ ဖွဈသညျ။ ၁၉၄၅-ခနျ့လောကျကတညျးက ယငျးစာအုပျ အင်ျဂလနျတှငျ စထုတျခဲ့သျောလညျး ယငျးအားလကျခံအားပေးသူ နညျးလှသညျ။ ကှနျမွူနဈဝါဒ၏ အုတျမွဈဖွဈသညျ့ မာ့ချဈဝါဒကို အသအေခြာ အကယျြတဝငျ့ သုံးသပျစိစဈ ဝဖေနျငွငျးပယျထားသညျ့ ထို “ပှငျ့လငျးလူ့အဖှဲ့အစညျး” စာအုပျကို ၁၉၈၉-ခုနှဈ ဘာလငျတံတိုငျးပွိုကပြွီး စဈအေးတိုကျပှဲ ပွီးဆုံးသှားသညျ့အခါကမြှ လူအမြားစတငျ သတိထားမိလာကွခွငျး ဖွဈလသေညျ။
ပေါ့ပါ၏ ရေးသားခကျြမြားသညျ ဒီမိုကရစေီစနဈ၏ အခွခေံမူမြားကို အူလိုကျသညျးလှိုကျ ရဲရဲရငျ့ရငျ့ ကာကှယျခုခံသညျ၊ ဒီမိုကရကျတဈ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားဖွငျ့ ကောငျးစှာ အုတျမွဈခတြညျဆောကျအပျသော လူ့အဖှဲ့အစညျးမြား၏ ရုပျပုံလှာကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျယောငျနိုငျငံ ဖျောညှနျးပွလသေညျ။
ကားလျပေါ့ပါ (၁၉၀၂-၁၉၉၄) ၏ အတှေးအချေါမြားအနကျ သိသငျ့သိထိုကျလောကျသညျ့ အကွောငျးအရာ အခြို့ကို အောကျပါအတိုငျးတငျပွလိုပါသညျ။
(က) ပေါ့ပါသညျ မှားနိုငျခွအေားလကျခံသညျ့ဝါဒီ (fallibilist) တဈဦးဖွဈသညျ။ “ငါတို့အယူဝါဒသညျ မမှားနိုငျ၊ ငါတို့အယူဝါဒသညျ အမှနျတရားကို အသအေခြာသိသညျ၊ အနာဂတျလမျးကွောငျးတှငျ ဘာဖွဈလာမညျကို အသအေခြာပွောနိုငျသညျ၊ ရှပွေညျတျောကို လောကနိဗ်ဗာနျကို မညျကဲ့သို့ တညျဆောကျရမညျ” ဆိုသော အယူဝါဒမြားအား ပေါ့ပါ လကျမခံပေ။ ကှနျမွူနဈဝါဒ အစရှိသော သမိုငျးဆငျ့ကဲဖွဈစဉျမြားကို အသအေခြာသိသညျဆိုသညျ့ သမိုငျးရေးရာဖွဈစဉျသဝေါဒ (Historicism) သညျ လူ့ဘောငျလောကတှငျ လူမှုစနဈမြားကို လူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ခြီ၍ စမျးသပျမှုမြား ပွုလုပျကွသဖွငျ့ ကွီးစှာထိခိုကျနဈနာမှု ဖွဈစကွေောငျး ပေါ့ပါက ပွောသညျ။
(ခ) ပေါ့ပါက သိပ်ပံနညျးကအြမှနျတရားမြားကို ရှာဖှရောတှငျ falsification (ချေါ) အမှားရှာဖှထေောကျပွခွငျး အားဖွငျ့ အနီးဆုံးအမှနျရှာခွငျး နညျးလမျး သညျသာလြှငျ အမှနျတရားနှငျ့ အနီးဆုံးရနိုငျမညျ့ နညျးလမျးဖွဈကွောငျးတငျပွသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ – ငနျးမှနျသမြှ သညျအဖွူရောငျဖွဈသညျ ဆိုသော အဆိုသညျ အဖွူမဟုတျသော ငနျးတဈကောငျကောငျကို မတငျပွနိုငျသေးသရှေ့ မှနျသညျဟု ယူဆမညျ၊ သို့ရာတှငျ သွစတေးလတြှငျ ငနျးနကျတဈကောငျ စတှသေ့ညျနှငျ့ ထိုအယူအဆမှားကွောငျး စတငျအတညျပွုမညျ ဆိုသော နညျးလမျးမြိုးဖွဈသညျ။ သိပ်ပံနညျးကြ ဆိုရှယျလဈဝါဒ ဆိုသညျ့ မာ့ချဈဝါဒ၏ “သိပ်ပံနညျးကမြှု” ဆိုသညျအား ပေါ့ပါက လကျမခံပေ။ falsification အား critical rationalism ဟုလညျး ချေါဝျေါကွသညျ။
(ဂ) ပေါ့ပါသညျ piecemeal social engineering (ချေါ) တဈပိုငျးခငျြး တဈလှမျးခငျြး လူမှုစနဈ ပွောငျးလဲရေးဝါဒ ကိုဖျောထုတျတငျပွခဲ့သညျ။ လူအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ခြီ ဖွိုဖကျြအသဈဆောကျသညျ့ အလှနျအလှမျးကယျြ လောကပွောငျးလဲရေး စီမံကိနျးကွီးမြားအစား – လူမှုဖူလုံရေးကဏ်ဍ၊ တရားစီရငျရေး ပွုပွငျမှု၊ လကျဝါးကွီးအုပျဆနျ့ကငျြရေးအတှကျ အစိုးရဝငျရောကျစှကျဖကျမှု စသညျအားဖွငျ့ တဈစိတျတဈပိုငျးခငျြး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား လုပျသှားခွငျးကို ထောကျခံအားပေးသညျ။
(ဃ) အမြားပွညျသူဆိုငျရာမူဝါဒခမြှတျရေးနှငျ့ပတျသကျလြှငျ ပေါ့ပါသညျ negative utilitarianism (ချေါ) အဆိုးဘကျကိုကွညျ့မွငျသော အသုံးခပြဓါနဝါဒ ကိုလကျခံသူဖွဈသညျ။ ယငျးအယူအဆအရ ဆိုလိုသညျ့သဘောမှာ – နိုငျငံတျော (အစိုးရ) ၏ အခနျးကဏ်ဍအား လူတို့အား ပြျောရှငျစသေောအရာမြား လုပျဆောငျပေးခွငျးကို အဓိကဦးတညျသညျထကျ ဖယျရှားနိုငျသမြှသော ဒုက်ခတို့အား ဖယျရှားလြော့ပါးစခွေငျးအား ဦးတညျလုပျဆောငျလိုသညျ့ သဘောဖွဈသညျ။ “မသိမွငျနိုငျသေးသော ခမျြးသာသုခမြားကို ထုတျလုပျနိုငျရနျကွိုးစားခွငျးထကျ လကျတှမွေ့ငျသိနရေသော ဒုက်ခမြားကို လြှော့ခရြနျ ကွိုးစားပါ” Seek to reduce known ills than to produce unknown blessings. ဆိုသညျ့သဘော ဖွဈလသေညျ။
(င) ပေါ့ပါ တငျပွသော သညျးညဉျးခံအတူယဉျတှဲနထေိုငျမှုဆိုငျရာ ၀ိရောဓိ (paradox of tolerance) သဘောအရ – သညျးညဉျးခံ အတူယှဉျတှဲနထေိုငျရေး (tolerance) အား အခွခေံပငျကိုယျအားဖွငျ့ မလိုလားသူမြားကို လူ့အသိုငျးအဝိုငျး ဒီမိုကရဒေီအသိုငျးအဝိုငျးတှငျ နရောမပေးအပျ၊ ထိုသညျးညဉျးမခံသူ (the intolerant) မြားသညျ အားမရှိသေးသောအခါ ဒီမိုကရဒေီအရိပျကို ခိုလှုံလှုပျရှားဖို့ကွိုးစားပွီး အားရှိလာလြှငျ ဒီမိုကရဒေီစနဈကို ဖွိုဖကျြပဈမညျ့ သူမြား ဖွဈကွသညျ။ ပေါ့ပါက ကှနျမွုနဈမြားကို အဓိက လကျညှိုးထိုး ဥပမာပေးသညျ။ (ဆိုမာလီယာဖှား အမရေိကနျသူ Ayaan Hirsi Ali က အစ်စလမျမဈ အခွခေံဝါဒီမြား ၏ ပွုမှုလှုပျရှားဆောငျရှကျမှုမြားကိုလညျး ပေါ့ပါပွောသော paradox of tolerance ထဲတှငျ ထိုနညျးလငျြလငျြ ထညျ့တှကျစဉျးစားသငျ့ကွောငျး အစဉျထောကျပွလရှေိ့သညျ။)
(စ) ပေါ့ပါ တငျပွသော လှတျလပျမှုဆိုငျရာဝိရောဓိ paradox of freedom အရ ဆိုလိုသညျမှာ – လှတျလပျမှုကို အကနျအသတျမရှိ လှတျပေးထားလြှငျ လှတျလပျမှုမြား၏ ကဆြုံးခနျးသို့ ရောကျသှားနိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဥရောပတှငျ စကျမှုတျောလှနျရေးထှနျးကားပွီးခါစ အရငျးရှငျစနဈပျေါထှနျးခါစ Laissez-faire လကျစေးဖယျယာ (ချေါ) ဇကျကွိုးမဲ့အရငျးရှငျစနဈဖွဈလသေညျ။ အလုပျခြိနျကနျသတျမှုမြားမရှိ၊ အစိုးရဝငျရောကျထိနျးကြောငျးမှုမြားမရှိ၊ လကျဝါးကွီးအုပျမှုဆနျ့ကငျြရေး ဥပဒမြေားမရှိ၊ အလုပျသမားသမဂ်ဂမြား မရှိ၊ ပငျစငျခံစားခှငျ့စနဈမြားမရှိသညျ့ကာလမြိုးတှငျ စီးပှားရေးအငျအားကွီးသူမြား၏ ထိနျးကှပျမဲ့လှတျလပျမှုသညျ စီးပှားရေးအငျအားခြိနဲ့လှနျးသူမြားကို အခပေးကြှနျအဆငျ့သာသာသို့ ရောကျသှားစနေိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဤအခွအေနမြေားကို အစိုးရက ထိနျးကှပျပေးရမညျ ဟု ဆိုလိုသညျ။
(ဆ) ပါတီအမြားစနဈထကျ နှဈပါတီ သို့မဟုတျ နှဈပါတီ အဓိကပုံစံဖွငျ့ ပုံဖျောနိုငျရေးဘကျက ပေါ့ပါ အားသနျပုံရသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ထိုနှဈပါတီတို့၏ စဉျဆကျမပွတျ မိမိကိုယျကို ဝဖေနျနိုငျမှု ဖွဈစဉျသညျ ပါတီအမြားစနဈ သို့မဟုတျ အခြိုးကကြိုယျစားပွုမှုစနဈထကျ ပိုမိုအားကောငျးသညျ ဟု ပေါ့ပါက သုံးသပျသညျ။ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရဖှဲ့ရသော စနဈမြားတှငျ ပါတီငယျမြားသညျ ညှနျ့ပေါငျးအစိုးရကို အခြိနျမရှေးပွုတျကအြောငျ လုပျနိုငျသညျဖွဈရကား ပါတီငယျမြားထံ ရှိသငျ့သော အာဏာမြားထကျ မတနျတဆအာဏာမြား ရောကျရှိနတေတျကွောငျး သူက ထောကျပွသညျ။
(ဇ) “ပေါ့ပါ အလိုကြ ဒီမိုကရစေီဟူသညျကား လူအမြား၏ အုပျခြုပျမှုသကျသကျကို ဆိုလိုခွငျးမဟုတျ။ ဘယျဟာကမှနျတယျ ဘယျဟာကမှားတယျ ဆိုတာကို အမြားစုသဘောအားဖွငျ့ ဆုံးဖွတျမှုကို ဆိုလိုခွငျးမဟုတျ။ ပေါ့ပါ ပွောသညျ့ ဒီမိုကရစေီ ဟူသညျမှာကား ဆိုးသှမျးအုပျခြုပျသူမြားကို သှေးထှကျသံယို အကွမျးဖကျမှုမရှိဘဲ ဖယျရှားအစားထိုးနိုငျအောငျ နိုငျငံတျောပုံစံအား မညျသို့ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျသငျ့သညျ ဆိုသညျ့ ပွဿနာအား အဖွထေုတျခွငျးပငျ ဖွဈသညျ” ဟု ပေါ့ပါ၏ အတ်ထုပတ်တိအကဉျြးအား ရေးသားသူ Hannes H. Gissurarson ကဆိုသညျ။
ကားလျပေါ့ပါ၏ ရေးသားခကျြမြားအနကျမှ မှတျသားဖှယျ ကောကျနှုတျခကျြတဈခုကို အောကျတှငျ ဖျောပွပါသညျ။
‘နိုငျငံတျောရဲ့အာဏာကို ဘယျသူကိုငျတှယျမလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခှနျးဟာ ‘အာဏာကို ဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခှနျးနဲ့ ‘အာဏာ ဘယျမြှလောကျကို ကိုငျတှယျမှာလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခှနျးတှနေဲ့နှိုငျးစာရငျ ဘာမှ အရေးမကွီး သလောကျပဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ကြှနျတျောတို့ အသအေခြာနားလညျပွီးသား ဖွဈရမယျ့ ကာလကိုတောငျ တျောတျော လှနျခဲ့ပါပွီ။ ရရှေညျကရြငျ ကြှနျတျောတို့ သိကိုသိလာရမှာက ဘာလဲဆိုတော့ – နိုငျငံရေးပွဿနာ မှနျသမြှဟာ အငျစတီကြူးရှငျး (ခိုငျမာအစဉျအလာရေးရာ အဖှဲ့အစညျးတကဆြောငျရှကျမှုရေးရာ) ပွဿနာတှသောဖွဈကွောငျး လူပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့ ပွဿနာဆိုတာထကျ ဥပဒမေူဘောငျရဲ့ ပွဿနာမြားသာဖွဈကွောငျး၊ နောကျပွီးတော့ တနျးတူညီမြှရေးဆီသို့ ဦးတညျဖွဈထှနျးမှုဆိုတာမြိုးဟာ အာဏာကို အငျစတီကြူးရှငျးပုံစံကကြနြန ခြုပျကိုငျထားမှုအားဖွငျ့သာလြှငျ ကောငျးစှာစောငျ့ရှောကျ ထိနျးသိမျးနိုငျမယျ ဆိုတာတှကေို သိနားလညျအောငျ လုပျကိုလုပျကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။”
ပေါ့ပါ၏ ဤဆှေးနှေးခကျြနှငျ့ စပျလဉျြး၍ – ဟိုးရှေးရှေး ပလတေို အယူအဆမှသညျ ၁၉-ရာစု ကားလျမာ့ချအထိ နျိုငျငံရေးသဘောတရားတို့သညျကား မညျသို့အုပျခြုပျသငျ့သနညျး ဆိုသညျကို မကွညျ့ဘဲ “မညျသူ” က အုပျခြုပျသငျ့သညျ ဆိုသညျ့ ရှုထောငျ့မှသာ ကွညျ့မွငျခဲ့ကွသညျ့အတှကျ မှားယှငျးခဲ့ကွကွောငျး ပေါ့ပါက ထောကျပွသညျ။
ပေါ့ပါ၏ ဤဆှေးနှေးခကျြကို ဖတျရသညျ့အခါ လှနျခဲ့သော ခွောကျနှဈခနျ့က မိတျဆှေ NLD ပါတီဝငျတဈဦးနှငျ့ စကားစမွညျပွောမိရငျး သူ၏ နိုငျငံရေးအမွငျကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွစဉျ သူ၏ ပွောစကားတဈခှနျးကို မှတျမိသတိရမိ၏။ သူပွောပွသော သူ၏နိုငျငံရေးအမွငျမြား၏ အဆုံးသတျ၌ “ကြှနျတျောတော့ ဒျေါစုကို ယုံတယျဗြ” ဆိုသညျ့စကားကို အလေးအနကျ ပွောကွားပါရှိသညျ။ ထိုသို့ ဒျေါစုကို ယုံကွညျကွောငျး ဒျေါစုထံတှငျ နျိုငံရေးလမျးစဉျမှနျသမြှကို ယုံကွညျပုံအပျထားကွောငျးကို အခွားသော NLD အမတျမြားထံမှလညျး ကွားမိဖူးလသေညျ။ အငျစတီကြူးရှငျးပုံစံကကြ အလုပျလုပျခွငျးကို မတညျဆောကျဘဲ “ဒျေါစုကို ယုံကွညျခွငျး” အပျေါ ဝကှကျအားပွုတညျမှီထားသော ၎င်းငျးတို့၏ ပါတီသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၁ ဖဖေျောဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ တပျက အာဏာရယူသှားမှုဖွဈစဉျအား ကနျြးမာကွံ့ခိုငျစှာ ဘယျလိုရငျဆိုငျမညျ ဆိုသညျကို ပွငျဆငျထားမှု ရှိခဲ့ကွောငျးကိုကား မတှရေ့ပေ။
[လူငယျမြားအတှကျ နိုငျငံရေးမှတျစုတိုမြား (၁၀)]
To download “Open Society and Its Enemies Volume I”
Click to access 2015.59272.The-Open-Society-And-Its-Enemies.pdf
To download “Open Society and Its Enemies Volume II”
Click to access 2015.77661.The-Open-Society-And-Its-Enemies-Vol-Ii.pdf
Previous ယဉျကြေးမှုမြား ထိပျတိုကျတိုးခွငျး
Next ထောမတျဈပိနျး ၏ လှတျလပျရေးတိုကျပှဲချေါသံ “Common Sense” စာလှာ